Bourse de l'emploi : Bafoussam abrite la troisième édition. - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Suuqa shaqada: Bafoussam wuxuu ku yaallaa daabacaadda sadexaad.
Suuqa shaqada: Bafoussam wuxuu ku yaallaa daabacaadda sadexaad.
Khabiirka adeega guddoomiyaha gobolka galbeedka ayaa ka soo dagaya tan iyo Talaadadii 09 July, illaa 10 July 2019, daabacaadda saddexaad ee xarun ganacsi oo ay weheliso is-weydaarsi shaqo.
Waxaa la bilaabay tan iyo markii 2017 ay ka soo qaybgaleen wafdiga gobolka ee tababarka shaqooyinka iyo tababarka shaqada ee galbeedka iyo maalgalinta guddoomiyaha gobolka, kulankan ayaa looga golleeyahay in uu fududeeyo lana horumariyo is-weydaarsiga shaqo-doonka, codsadayaasha tababarka, shaqaalaha shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo maamulada guud iyo in ka badan oo dhan si ay uga caawiyaan dadka dhalinyarada ah ee ku jira hanaanka shaqo raadinta.
Xusuustaa Issa Bakary Tchiroma, Wasiirka Shaqada iyo Tababarka Xirfadaha lahaa shirka sanadlaha ah ee madaxda u ahaa dhexe iyo maamul baahsan ka January 30 1 2019er February lagu qabtay, dhigay koorsada in la ogaado caqabadaha ka mid ah shaqada iyo xal u helidda dhibaatada shaqo la'aanta, gaar ahaan ka qalin dhallinyarada.
Xarunta ganacsiga ee xiriirka la leh suuqa shaqada ayaa markaa loogu talagalay in ay ahaato qalab istiraatiijiyadeed iyo qalab wax ku ool ah oo ku yaalla meeshan, taas oo gacan ka geysan doonta xalinta wadankan.
Mega Markle iyo Prince Harry waxay rabaan walaalaha iyo walaalaha Walie, sida uu sheegay khabiir
Franck Zambo Anguissa oo ku biiray Spain